ပြင်ပက Wall ဆောက်လုပ်ရေး
ပြင်ပက Wall ဆောက်လုပ်ရေး အပေါ်ယံပိုင်း level ဆေးသုတ်ဝိသေသလက္ခဏာများ
နိပွန် ပြင်ပက Wall ဆောက်လုပ်ရေး Level ဆေးသုတ်တိုက်ရိုက်ထိုကဲ့သို့သောသုတ်ဆေး, Mosaic, အုပ်ကြွပ်, နှင့်ကျောက်ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းနံရံများ၏နံရံခြစ်ခြင်းနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နီးပါးရိုးရှင်းသောတင်ပါသည်အားဖြင့်ပန်းခင်းလမ်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုလုံးဝမြို့ရိုးအများ၏မညီမညာဖြစ်နေသောလျှော့ချနိုင်ပြီး, တစ်ချိန်တည်းမှာ, ကကောင်းသော elasticity ရှိပါတယ်, ဒါကိုတော့ဆန်သော, အပူချိန်ကွာခြားချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မြို့ရိုးအပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအောင်မြင်သောနှင့်, Level ဆေးသုတ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါခိုင်မာတဲ့ကော်ရှိပါတယ်။ အဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အပြောင်းအလဲနဲ့ပိုပြီးပြည့်စုံရလိမ့်မည်။
ပြင်ပက Wall ဆောက်လုပ်ရေး Level အပေါ်ယံပိုင်းဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာ
လူအများစုဟာနီပွန်အတွင်းပိုင်းဆေးသုတ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်, သို့သော် flattening အပေါ်ယံပိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုံးဝမရှင်းလင်းသည်။ နိပွန်အပြင်မြို့ရိုးကို level အပေါ်ယံပိုင်းလျှောက်ထားသောအခါအချိုးအလွန်အရေးကြီးပါသည်။3-4, ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းခြင်း, အမှုန့်ထပ်ထည့်ပြီးတော့ပါဝါလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူကောင်းစွာနှိုးဆော်, ကွန်တိန်နာထဲသို့ရေလောင်း: ရေမှအမှုန့်များ၏အချိုးကို 10 ဖြစ်ပါတယ်။ နိပွန်အပြင်မြို့ရိုးကို level ဆေးသုတ်ပု blending ၏ပြီးစီးပြီးနောက်3နာရီအတွင်းအသုံးပြုနိုင်ရန်အကြံပြုသည်။ အပူချိန်မြင့်မားပါကထိရောက်စွာစီမံကိန်းများ၏အရည်အသွေးသေချာစေရန်သကဲ့သို့,2နာရီအတွင်းအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
ပြင်ပမြို့ရိုးကိုဆောက်လုပ်ရေး level အပေါ်ယံပိုင်း - ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
နိပွန်အပြင်မြို့ရိုးကို level အပေါ်ယံပိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးရိုးရှင်းပြီးအမြန်ဖြစ်သော်လည်းအချို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများလည်းရှိပါသည်။ နိပွန်အပြင်မြို့ရိုးကို level အပေါ်ယံပိုင်းတစ်ဦးအေးမြခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။ အဆိုပါသိုလှောင်မှုအပူချိန်ပိုကောင်း 0-35 ° C မှစောနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအပူချိန် 5-40 ° C မှဖြစ်ပါတယ်။ အာကာသကောင်းကင်၏ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆဖြစ်ပါသည် <80%. Avoid raining within 12 hours after the completion of construction. Nippon exterior wall construction leveling coatings contain alkaline before the upper wall is dry. Because the leveling paint should useaseries of complex reactions such as ash calcium and water and carbon dioxide to improve its own strength, calcium hydroxide will be produced during use, which usually lasts for 5-7 days before disappearing. Not good, it will give the builderaburning sensation, and must pay attention to the characteristics of the leveling paint during construction.